Soo dejisan Fences 3.05 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Fences
Deedadka – software ah inuu abaabulo astaanta desktop ah ee dabaqadaha kala duwan. Deedadka si toos ah tilmaamaysaa oo wuu qaybiyaa astaanta ugu by nooc oo kala duwan oo ay u kala soocaan blocks qaybo kala duwan ee shaashadda. Software ayaa awood u astaysto in le’eg, hufnaan ama midab ah blocks hoos baahida shakhsi ahaaneed ee user ah. Deedadka kuu oggolaanayaa in aad Waara qayb ka mid ah shaashadda ka halyeey aan loo baahnayn taasi oo ka qarinaya ay. Software wuxuu taageeraa hab kordhinta automatic ee shaashadda. Deedadka sidoo kale awood u si loo badbaadiyo gaadmada ah iyo meesha blocks shaashadda si ay u soo kabashada ay dhacdo in shil nidaamka.
Llaahi Yuusuf ee astaanta nooca
Iyada oo ka mid ah muuqaalka kore ee blocks astaanta
Qariyey ee astaanta
Kor uqaadista shaashadda
Soo dejisan Fences
Faallo ku saabsan Fences
Fences Xirfadaha la xiriira